Andron’ny manamboninahitra : Hamafiso ny firaisan-kina sy ny fanompoana firenena hoy ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaAndron’ny manamboninahitra : Hamafiso ny firaisan-kina sy ny fanompoana firenena hoy ny Filoha
Omaly no nanatanterahana ny andron’ny manamboninahitra tetsy amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha izay notronin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay niatomboka tamin’ ny famoriana notronin’ ny filoha faratampon’ny foloalindahy izany. Mandritra ny famoriana ihany koa no nananganana ny sainam-pirenena malagasy izay niarahan’ ny rehetra niredona ny hiram-pirenena, ary nanaraka izany ny hiran’ny akademian’ny tafika. Ny manamboninahitra lefitra eo anivon’ ny fiambenana ny filoha , ny lietnant kolonely Andriamahefa Hajanaivo Olivier, no nanome voninahitra ny fanolorana gisa ho an’ ny filoham-pirenena izay fomba fanao ihany koa amin’ny fotoana tahaka izao. Nandritra izany no nitodian’ity manamboninahitry ity tamin’ ireo manamboninahitra namany ny tokony hiompanan’ny hery velona eo anivon’ ireo foloalindahy amin’ ny fitiavan-tanindrazana sy ny foloalindahy.
Nandritra izany lanonana miaramila izany ihany koa no niharaban’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireo manamboninahitra manerana ny nosy, sy ny tokony hanamafisan’izy ireo hatrany ny firaisan-kina sy ny fiaraha-mientana amin’ ny fanatanterahan’ izy ireo ny asa masina izay nankinina amin’ izy ireo. “Ny taona 2018 hoy hatrany ny filoham-pirenena dia fanamafisana ny asa izay efa vita, indrindra ny ady amin’ ny fahantrana sy ny fitazanona ny asa efa tanteraka, ary indrindra ny fitarafana ny ho avy anatin’ ny fivondrona sy ny fanamafisana hatrany ny firaisan-kina” hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nanamarika ny andron’ ny manamboninahitra omaly moa ireo hetsika ara-panatanjahantena maro , izay nisy isaka ny toby miaramila.
Araka ny tantara dia andron’ny fankalazana ny fetin’ny manamboninahitra eto Madagasikara ny 12 janoary. Ny 12 Janoary 1967 no nidiran’ny andiany voalohany tao amin’ny ACMIL Antsirabe, izay toeram-panofanana ny manamboninahitra. Nitaky ireo mpianatra ireo mba hankalazana ny fahatsiarovana ny taona nidiran’izy ireo ny 12 Janoary 1968. Tsy nanaiky anefa ny mpampiofana tamin’izany, ka niteraka fahatezerana ho an’ireo mpianatra izany, ka nahatonga azy ireo naneho ny fomba tsy fankasitrahana. Anisan’izany ny tsy fihinanan-kanina, ary nihamafy ny fitakiana satria efa niditra koa ny andiany faharoa. Farany dia tapa-kevitra ihany ireo mpampiofana, ary nisy ny fivoriana nataon’izy ireo niaraka tamin’ireo mpianatra ka noraiketina ihany ny fankalazana isaka ny 12 Janoary.
Mba ahafahana manohy ireo antontan-taratasy na ihany raharaha mafana sy goavana eto amin’ ny firenena, dia omaly no nisy ny fanomezana ireo antontan-taratasy izay teo am-pelatanan’ny BIANCO eny amin’ ny PAC na ny pole anti-corruption. ...Tohiny